बिकास /परिवर्तन Archives - Page 15 of 24 - धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
‘सूर्तीजन्य प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य’
काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगदर घटाउन सूर्तीजन्य प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र अंकित सन्देश छाप्नुपर्ने निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। एक्सन नेपालद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तक्रियामा मन्त्री अधिकारीले सूर्तीजन्य प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा..
यसरी गरिन्छ विदेशमा काम गर्न जाने कामदारको स्वाथ्य परिक्षण ?
गएको एक महिना नबित्दै गत पुष १७ मा नेपालगन्जका अंकित गौतम मलेसियाबाट फर्किए । फर्किनुको कारण स्वाथ्य परीक्षण असफल हुनु थियो । जानुअघि चक्रपथस्थित समानान्तर पोलिक्लिनिकमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उनी ठीक थिए । विदेश पठाउने अविचल ओभरसिजले उनलाई उक्त पोलिक्लिनिकबाट बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो । मलेसियामा फोमेमा नामक..
विद्यार्थीमा स्वाइन फ्लु देखिएपछि निजी विद्यालय बन्द
ठमाडौं, २० फागुन । राजधानीको एक निजी विद्यालयमा स्वाइन फ्लु संक्रमित विद्यार्थी फेला परेपछि विद्यालय बन्द गरिएको छ । कलंकीस्थित पिनाकल स्कुलमा कक्षा ९ मा अध्ययरनरत विद्यार्थीमा स्वाइन फ्लुको लक्षण देखिएप्छि विद्यालय बन्द गरिएको सो विद्यालयले जनाएको छ । सो विद्यालयका प्रिन्सिपल नेमराज घिमिरेले विद्यार्थीको स्वास्थ्थ परीक्षण गर्दा..
स्वाइन फ्लु संक्रमित महिलाको मृत्यु
अतुल मिश् काठमाडौ, -स्वाइन फ्लुको संक्रमण भई राजधानीमा उपचाररत एक महिलाको शनिबार राति मृत्यु भएको छ । दुई साताअघि काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा भर्ना भएकी उनी एक सातादेखि भेन्टिलेटरमा थिइन् । आइतबारसम्ममा स्वाइन फ्लु संक्रमण प्रमाणित भएकाहरूको संख्या ४३ पुगेको छ । संक्रमित दुई जना एक सातायता अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन् ।..
राजधानीमा स्वाइनफ्लुबाट एक महिलाको मृत्यु, देशभर फैलियो त्रास
काठमाडौं, १७ फागुन । भारतमा हजार भन्दा बढीको ज्यान लगिसकेको स्वाइनफ्लुबाट नेपालमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानी काठमाडौंकी एक महिलाको आइतबार विहान स्वाइनफ्लुबाट अस्पतालमै उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । काठमाडौंको मोडल अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै राजधानीको क्षेत्रपाटीकी ५० बर्षीया महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले..
जानी राखौ.. कुन ब्लड ग्रुप भएका मानिसको स्वभाव कस्तो ……?
साथीको मानिसको बानीको बारेमा थाहा पाउन चाहानु हुन्छ? यदी चाहानु हुन्छ भने तपाई आफ्नो साथीको रगत समुह पत्ता लगाएर जानकारी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। Japaneseinstitute ले गरेको एक अनुशन्धान अनुसारमानिसहरुको रगत समुह अनुसारउसको चालचलनको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ ररगत समुह फरक भएमा मानिसको विचार र बानी फरकहुने सम्भावना धेरै हुन सक्छ। यहाँ रगत समुह सँग..
स्वाइन फ्लुबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि
काठमाडौँ, १६ फागुन - चिसो बढेसँगै स्वाइन फ्लु (इन्फ्लुइएञ्जा एचवानएनवान) सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । हालसम्म नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आएका कति जनामा स्वाइन फ्लुको सङ्क्रमण भेटियो भन्ने एकीन जानकारी प्रयोगशालाले सञ्चारकर्मीलाई सार्वजनिक गरेको छैन । तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या..
हात्तीपाइलेविरुद्ध औषधि खानेमा सप्तरी पहिलो स्थानमा –
हात्तीपाइलेरोगविरुद्धको औषधि खानेमा सबैभन्दा बढी सप्तरी जिल्लावासी रहेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पछिलो पटक दुई वर्षयता सबैभन्दा बढी व्यक्तिले हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खाएको जनाएको छ । जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिले औषधि सर्वाधिकरुपले खाएपछि ७५ जिल्लामध्ये सप्तरी जिल्ला नै पहिलो भएको दाबी गरिएका छन् । ..
स्वाइन फ्लु जाँच अपुग थप २१ जनामा पुष्टि, गम्‍भीर छैन सरकार
काठमाडौं, फागुन १६ –स्वाइन फ्लुले महामारीको रूप लिने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले चौबीसै घन्टा परीक्षण सेवा दिनुपर्नेमा शंका लागेर परीक्षण गराउन आएका बिरामीसमेत जाँच्दैनजाँची फर्कन बाध्य भएका छन्। टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा शुक्रबार दुई बजे नै परीक्षण सेवा बन्द भएपछि १५ जना बिरामी जाँच्दैनजाँची फर्कन बाध्य..
धादिङ स्वाईनफ्लुको उच्च जोखिममा, चितवन र काठमाण्डौमा स्वाईनफ्लु संक्रमित
धादिङ– धादिङ जिल्ला स्वाईनफ्लुको उच्च जोखिममा रहेको छ ।पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा फैलिएको स्वाईनफ्लुबाट ८ सय भन्दा बढीको ज्यान गईसकेको छ । यसको असर नेपालमा पनि पर्न थालिसकेको छ । नेपालमा अहिले सम्म १५ जना भन्दा बढीमा यसको संक्रमण देखीएको छ । धादिङसँग सिमान जोडिएको काठमाण्डौ जिल्लामा पनि स्वाईनफ्लु संक्रमति व्यक्तिहरु भेटिसकेको छ ।..
खोई त ? धादिङबेसीमा रहेको मासु पसलको गुुणस्तर सुधार भएको ।
धादिङ– जिल्ला पशु सेवा कार्यालय धादिङले जिल्लामा रहेका मासु पसलको गुणस्तर सुधान गर्न पटक–पटक अनुगमन गरेपनी अहिले सम्म सुधार हुन सकेको छैन । बजार अनुगमनको क्रममा दिएको सात दिने म्याद नाघेको पनि महिनौ भईसकेको छ । तर न मासु पसलको गुणस्तर सुधार भएको छ, न पसलेमाथि कारबाहीनै भएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्ने मासु पसलेहरुलाई..
भाइरसको प्रकार खोजिँदै-स्वाइन फ्लु संक्रमित १० पुगे
काठमाडौ, - मुलुकमा प्रयोगशाला परीक्षणबाट स्वाइन फ्लु प्रमाणित हुने बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि भाइरसको स्ट्रेन -प्रकार) खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ई कान्तिपुर डट कममा खबर लेखिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट मंगलबारसम्म स्वाइन प्रमाणित बिरामीको संख्या १० पुगेको छ। 'स्ट्रेन हाल भारतमा र गतवर्ष..
कसरी बच्ने स्वाइन फ्लुबाट ?
सन् २००९ ताका माहामारीका रुपमा फैलिएको स्वाइन फ्लुको प्रकोप पुनः देखिन थालेको छ । सन् २०१५ मात्र छिमेकी मुलुक भारतमा यस रोगबाट ८ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १४ हजारभन्दा बढी संक्रमित बनेका छन् । नेपालमा पनि हालसम्म ५ जना यस रोगबाट संक्रमित भइसकेको पुष्टि भएको छ । खुला सिमानाका कारण भारतबाट यस रोगबाट ग्रसितहरु नेपाल सजिलै..
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई नै स्वाइन फ्लु भएपछि
फागुन १२– भारत गुजरातका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री शंकर चौधरीलाई स्वाइन फ्लु भएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणपछि चौधरीलाई स्वाइन फ्लु भएको पुष्टि भएको हो । गुजरातमा अहिले स्वाइन फ्लुको प्रकोप फैलिएको छ भारतीय अनलाईन आईविएन खबरले जनाएको छ । अहिलेसम्म गुजरातमा २ सय १९ जनाको स्वाइल फ्लुका कारण ज्यान गइसकेको छ भने..